Ink ntuli aka agaghị ehichapụ
Ihe nrịbama na-adịghị ehichapụ
TIJ2.5 Ndokwa na akara
45si katrij ink mgbaze
Ink ntinye ihe mgbaze
Ink dabere na mmiri
HP 45A 51645A katrij ink
Sistemụ njupụta CISS
Ink akara mkpịsị aka na-ede
Ink isi iyi
Ihe nrịbama ọcha pen
Ink akara na-adịgide adịgide
Ink mmanya na-egbu egbu
Ink ngwa nbipute inkjet
Ink agba agba
Ink nke Eco Solvent
Akwụkwọ ntụgharị ọkụ
Ink nke Sublimation
A3 Epson L1800 ngwa nbipute
A3 Epson L1300 ngwa nbipute
Ndụmọdụ sayensị ama ama: ink ihe na ink pigmenti dị iche
site admin na 2021-11-23
Dị ka anyị niile maara, anyị kwa ụbọchị na-ebi akwụkwọ nwere ike roughly kewara n'ime laser na-ebi akwụkwọ na inkjet na-ebi akwụkwọ abụọ a category.Ink-jet ngwa nbipute dị iche na laser ngwa nbipute, ọ bụghị nanị na-ebipụta akwụkwọ, ọzọ mma na-ebi akwụkwọ agba foto, n'ihi na nke mma ya. aghọwo otu n'ime ihe ndị a na-achọghị ...
Mkpịpị bọọlụ nwekwara ike ise ọrụ ebube na akwụkwọ, na-atụ anya bọọlụ gị!
site admin na 2021-10-29
A bịa n'ihe osise, ọtụtụ ndị na-eche maka agba mmiri, eserese mmanụ na eserese. Mana ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị bụ na na mgbakwunye na iji pensụl, pensụl watercolor na crayons see ihe, ha nwekwara ike ise mkpịsị ugodi na mkpịsị bọọlụ Karịsịa, pen ballpoint, blue nwere mmetụta miri emi nke m...
Mid-Autumn And National Day ezumike, mgbochi njem na njikwa ga-emerịrị oh ~
Obooc na-arịọ onye ọ bụla ezi ahụ ike na ezinụlọ obi ụtọ Mid-Autumn Festival National Day holiday note Cool autumn wind, osmanthus senti.N'oge mmemme nke National Day na Mid-Autumn Festival na-eru nso, ndị ọrụ ORboz niile na-achọ gị ezumike obi ụtọ na a. ezi na ụlọ! Dị ka r...
Igwe foto ink dabere na mmiri na ọdịiche ink mmanu mmanu? Hụ ole ị maara
site admin na 2021-09-06
Anyị na-ahụ n'okporo ámá ndị yi ọgaranya, ezi uche nnukwu-format mgbasa ozi, bụ foto igwe printing.Na dị iche iche ojiji ndapụta anyị na-eji ink abụghị otu, taa xiaobian na-enye gị a mfe nkọwa nke pictorial igwe na ink a. ole na ole dị iche iche: Igwefoto bụ ihe kacha comm...
Ndụmọdụ ihicha ink ole na ole ị ga-amarịrị
site admin na 2021-08-20
Mgbe ị na-eji mkpịsị bọọlụ ma ọ bụ mkpịsị akwụkwọ, Ọ dị mfe iwepụ ya ma ọ bụrụ na ị kpachapụghị anya Ink dị na uwe, Ozugbo ink na-agbanye, ọ na-esiri ike ịsacha ya. Ịhụ uwe mara mma ka emeruru ya, ọ naghị adị gị mma. Karịsịa na agba ọkụ, Amaghị ka esi emeso w...
Mpempe akwụkwọ na ink na-egbochi mmiri nke a na-eji na agba mmiri
Ink na watercolor bụ ngwakọta kpochapụwo. Ahịrị dị mfe nwere ike inye ọrụ agba mmiri zuru oke, dịka ọ dị na Vincent Van Gogh's Fishing Boats na Beach. Beatrix Potter ji ike mwepu agba nke watercolors na mmetụta dị nro nke agba mejupụta oghere n'etiti ahịrị na ...
Jiri obi ụtọ kelee maka mmecha nke agba nke abụọ nke Oboc Industrial Park
site admin na 2021-07-01
Na June 12, 2021, anyị gbakọtara na Minqing, Fuzhou, webatara oge dị mkpa na akụkọ ntolite Auboz. Anyị mere emume akara akara nke abụọ nke Fujian Auboz New Material Technology Co., Ltd na Minsin Gold Industrial Mpaghara. N'ọñụ na j...
Okpueze Fuzhou ọhụrụ abịala!!
site admin na 2021-06-21
Ọ bụ ezie na a na-achịkwa ọrịa ahụ nke ọma na mba ahụ, ndị mmadụ ka na-ebute ọrịa site n'oge ruo n'oge, na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ụzọ kacha mma iji gbochie ya. Ma ugbu a, ogwu ahụ adịghị ka mkpokọta gara aga dị ka otu nhọpụta, obodo dum Fuzhou n'efu. ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa coronavirus ọhụrụ, dịka…
Ink-jet na-ebipụta nsogbu nkịtị na obere ụzọ iji dozie ya
site admin na 2021-06-09
Inkjet ngwa nbipute bụ ugbu a anyị ụlọ ọrụ dị oké mkpa ezigbo onye inyeaka, na ngwa nbipute dị nnọọ mfe iji, ma na ngwa nbipute mgbe e nwere nsogbu otú anyị ga-esi nagide ya? Achịkọta ole na ole nkịtị obere usoro ka onye ọ bụla taa! 【1 】 Bipụta na eriri kwụ ọtọ (obere oge), ma ọ bụ...
Mụta ngwa ngwa ihe ndị bụ isi nke pensụl na eserese odida obodo, wee bịa na ebe a ka eserese ya n'ụzọ dị mma.
Ụjọ ihu igwe na-eme ka ọrụ na-agwụ ike, onye ahụ dum na-arahụ ụra, enweghị ike ibuli mmụọ nsọ, n'oge a, bịa na-ekpori ndụ foto mara mma iji teta ụbụrụ gị mgbe ị hụchara foto mara mma, ọ bụ eziokwu na obi onye ahụ dum. a gwọọla ma mmụọ ebilitela...
OBOOC # Ihe ngosi E-azụmahịa 2021 China Cross-border na-aga nke ọma
site admin na 2021-04-21
Ruo n'elekere 17:00 na 18th, Ngụkọta nke mmadụ 43,068 ga-agafe n'okporo ụzọ. Ọ bụ nnukwu slam ~~ Taa bụ ụbọchị nke abụọ nke ngosi ahụ. Iji na-ejere ndị ahịa ozi nke ọma, ndị enyi anyị na-abịa n'oge na-abịa ebe ngosi ihe ngosi maka nkwadebe mbido ~ Mr. Liu Qiying, onyeisi oche nke obooc New Mat...
ERUSE Shanghai International Emergency and Anti-Epidemia Materials Exhibition meriri agha mbụ ya!
site admin na 2020-11-07
Na nzaghachi maka ọrịa nje okpueze ọhụrụ, ụlọ ọrụ anyị ji ike ya guzobe akara ahụike ndụ ndụ ndụ nke Eruse. Julaị 15-16, 2020, nke China Chamber of International Commerce Shanghai Chamber of Commerce (Shanghai Chamber of International Commerce), Shanghai International na-akwado ...
Ink ntuli aka na-adịghị agwụ agwụ (ink ntuli aka nitrate ọlaọcha) na akara a na-apụghị ihichapụ nke ejiri maka ntuli aka nzuko omeiwu ma ọ bụ ntuli aka onye isi ala na Africa na mba Eshia nwere ezigbo mma na ọnụahịa bụ ebumnuche anyị.
Nkeji nke abụọ, Mpaghara Industrylọ Ọrụ Bajin, Obodo Baizhong, Mpaghara Minqing, Obodo Fuzhou, China